आज श्रावण २३ गते शनिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
आज श्रावण २३ गते शनिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण २३ गते । शनिबार। तपाईंको आजको राशिफल
भावुकताको कारण बोलि तथा व्यवहारमा ठेस पुग्न सक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । मान सम्मानमा चोट पुग्न सक्छ । आमाको स्वास्थ्यको कारण मानसिक तनाब बढ्न सक्छ । बिद्यार्थीहरुको लागि समय मध्यम रहेको छ। स्त्री मित्र र पानीबाट टाढा रहनु होला ।
चिन्ता मुक्त्त भइने छ । साहित्य तथा लेखन कार्यमा सहभागी भइने छ । साहित्य तथा कला क्षेत्रमा योगदान रहने छ । परिवारका सदस्यहरु विशेष गरी आमासंग आत्मीयता बढ्नेछ। छोटो यात्राको योग रहेको छ ।
सोचेको काम पुरा हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ । आर्थिक योजनाको कारण विभिन्न समस्य कम हुनेछ । नोकरी व्यवसायमा आफ्ना सहकर्मीहरुको सहयोग पाउनुहुनेछ । साथी भाइ तथा प्रियजन संगको भेटले मन प्रसन्न हुनेछ । परिवारमा सुख र शान्ति को वातावरण रहनेछ।
साथीहरु, परिवार र परिवारका सदस्यसंग धेरै राम्रो दिन हुनेछ। उपहार प्राप्त हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ । रमाइलो यात्रा हुनुको साथै उत्तम भोजन हुनेछ । शुभ समाचार मिल्ने छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । श्रीमतीसंग राम्रो समय बित्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा खुशी अनुभव गर्नु हुनेछ।
अदालत मामिलाहरुबाट टाढा रहनहोला । मानसिक तनाब बढ्नुको साथै विभिन्न चिन्ताले सताउने छ । शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । बोली र व्यवहारमा संयम राख्नुहोला अन्यथा विवादमा पर्न सकिन्छ । खर्च बढनेछ। स्त्री जातिबाट सचेत रहनु होला ।
लाभदायक दिन रहेको छ । बुजुर्गहरु र साथीहरुसँग दिन रमाइलोमा बित्नेछ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । श्रीमती र सन्तानसंग राम्रो समय बित्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुशी छाउने छ । टाढा रहेका सन्तानको खबर प्राप्त हुनेछ । प्रियजनसँग भेट्ने सम्भावना छ।
कार्यस्थलमा राम्रो वातावरणको कारण मन खुशी हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको योग बनेको छ । कार्य क्षेत्रमा उच्चपधाधिकारीले तपाईंको कामको प्रसंशा गर्नेछन् । परिवारमा सुखको वातावरण रहनेछ। आमाको पक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ।
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा थकान महसुस हुनेछ । जसको कारण उत्साह कम हुनेछ । व्यवसाहिक क्षेत्रमा मन्धि छाउने छ । उच्च अधिकारीहरुको व्यवहारले मन खिन्न हुनेछ । सन्तानसंग पनि मतभेद हुन सक्छ। नयाँ कामको थालनी नगर्नु उचित हुनेछ ।
नयाँ कामको थालनीको लागि समय उचित रहेको छैन् । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ सचेत रहनु होला । स्वासप्रस्वास र पेट सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । साथी भाइको सहयोग मिल्ने छ । विदेशबाट शुभ समाचार मिल्ने छ ।
दैनिक कार्य बाहेक दिन भेटघाट र रमाइलोमा बित्नेछ। स्वादिष्ट भोजन हुनुको साथै साथिहरुसंग रमाइलो यात्रा हुनेछ । विपरित लिंगका साथिहरु संग रमाइलो समय बित्नेछ । व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । सहभागी भएको स्थानबाट लाभ हुनेछ । सामाजिक मान-सम्मान बढ्ने छ ।
काममा सफलता प्राप्त गर्ने समय रहेको छ । तपाईंले गर्नु भएको कामबाट मान सम्मान बढ्ने छ । परिवारमा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । आमा तथा परिवारबाट शुभ समाचार मिल्ने छ । खर्च बढ्ने छ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
कल्पना शक्तिमा निखार आउने छ । दिन साहित्य सृजनाको लागी राम्रो रहेको छ । विद्यार्थीहरु पढाईमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछन्। पेटको समस्याले सताउन सक्छ । मानसिक भय हुनेछ । भाग्य वृद्धि हुनेछ । साथि भाइबाट सहयोग मिल्ने छ ।
Previous articleपिकअप भ्यान पल्टिँदा एक युवकको मृत्यु, २५ जनाभन्दा बढी घाइते
Next articleबालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेबिको बिस्कुट कारखानामा भीषण आगलागी